Arturo Vidal oo sheegay inuu mustaqbalkiisa K/cagta ku afjaraayo Juventus. - Caasimada Online
Home Warar Arturo Vidal oo sheegay inuu mustaqbalkiisa K/cagta ku afjaraayo Juventus.
Arturo Vidal oo sheegay inuu mustaqbalkiisa K/cagta ku afjaraayo Juventus.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Juventus Arturo Vidal ayaa cadeeyey inuu ku faraxsan yahay joogistiisa Italy, isagoona sheegay inuu ku farxi lahaa inuu inta mustaqbalkiisa ka dhiman joogo Serie A.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Chile ayaa suuqa xanta ah lagula xiriirinaayey inuu ku biirayo midkood kooxaha Manchester United iyo Real Madrid, laakiin wuxuu ka dhaqwaajiyey inuu waqtigaan ciyaarayo kubadii ugu wanaagsaneyd abid.
“Ma aanan ku fikirin wax tegitaan ah,” ayuu u sheegay fifa.com. “Waan ku celinayaa – Waan ku farax sanahay halkaan waxaana hadii ay noqoto aan ku qarash gareynayaa inta ka dhiman mustaqbalkeyga ciyaareed. Anigoo u sameynaya inaan ku farax sanahay.
“Wax walba waa ay wanaagsanaayeen markii aan ka ciyaarayey Germany oo aan la joogay [Bayer Leverkusen], laakiin hada waxaan u ciyaarayaa mid ka mid ah kooxaha ugu taariikhda wanaagsan kubada cagta.”